Peonies - a izimbali ezinhle kakhulu. ukunambitheka yabo, cishe ngeke abashiye ubani nandaba. Qaphela ukuthi le mbali sinikezwe amandla esingaphezu kwesivamile namandla. Mhlawumbe, akekho omunye engadini isitshalo akanayo izimfanelo efanayo. Manje sizoxoxa ngalokho okushiwo peony of feng shui.
Lokho amelela izimbali ezifana?
Ngokusho ezimfundisweni Feng Shui, peonies double nazo, ngasendleleni, bekulokhu uphawu uthando isiyezi, imizwa abanothando futhi romance.
Kukholakala ukuthi peonies kungabangela umuzwa ovuthayo, uthando olungaphezu koluvamile, abanothando mutual, kodwa futhi nomthelela ukwakhiwa entsha, ubuhlobo okuthakazelisayo.
Futhi singasisebenzisa kanjani amandla peonies?
Ochwepheshe kule mfundiso belulekwa ukusebenzisa umphumela lazo elimangalisayo ekuklanyweni isikhala yangaphakathi yokuhlala. Ikakhulukazi, kungaba wusizo ukuthi kube yimi owenza lezo amaphupho Ngokushesha uzothola umphefumulo wakho womshado kanye nokwakha ubuhlobo obuqinile emshadweni (noma ukuqinisa). Lokhu kuncoma akusho ubuhlungu futhi amantombazane engenabantu ngubani manje befuna ezobambisana naye ekuphileni.
Ngokwesibonelo, ake sithi ekhaya lakho uzobe ehlotshiswe imidwebo "peonies". Feng Shui, noma kunalokho labo abanamakhono kule mboni, kutuswa ukuba uhlanganyele lezi zithombe emakamelweni abaphilayo okulala. Kodwa kule bhizinisi odinga ukukwazi esinye isici. Peony feng shui amakhulu, ngakho ngokushesha yisigcibisholo ngesimo umngane eside elindelwe lekumele azuzwe, lezi imidwebo nemaphosta kufanele kuhlanzwe libe sendaweni evelele.
okuphila kwasemshadweni futhi peonies
izimbali Fresh endaweni vase, okuyinto zitholakala egumbini lokulala, noma pions nje esithombeni ku Feng Shui ezibhekwa uzibuthe sangempela nobudlelwano igagasi elisha inkanuko imizwa yothando. Lapho njengentelezi enjalo ekamelweni obuseduze, imibhangqwana baqale ukucabanga kakhulu komunye nomunye. Lezo peony - kuba plus elingenakuphikwa. Phawula ukuthi abanye abantu abashadile lesi talisman unika Ukukhululwa, ewakhulula amahloni ngokweqile futhi izakhiwo.
Feng Shui libabiza peony kulezozinto kabani kungenzeka asikwazi kwakubikezelwe. Ochwepheshe ukweluleka hhayi sikhohlwe negative side umphumela njengentelezi enjalo, okuyinto ukuthi pion kungaba bavusa Umthala entsha nemizwelo yothando. Peony zingase zisenze omunye abashadayo ku ukukhashelwa banal. Ukuze ugweme lokhu, isithombe salezi imibala (noma mascot efanayo Feng Shui) kudingeka isikhathi eside hang ekamelweni. Ukuze uvuselele ubuhlobo, akudingekile ukuba uhlanganyele isithombe lokho inyanga eyodwa noma ezimbili, kuzoba ngokwanele ezinsukwini ezimbalwa kuleli ngemfanelo egumbini.
Peonies ukuze career kanye ibhizinisi
Kusukela ezikhathini zasendulo babekholelwa ukuthi pion - a "bobukhosi 'imbali, ababusi neziphathimandla. Akukona nje kuphela ukuthi uphawu ukhomba ngophakathi, abakhethiwe nesibindi, kodwa futhi limelela ukunyakaza phezulu emkhakheni impumelelo.
Uma uhlela ukwenza intuthuko emkhakheni ibhizinisi noma enye ukuya phezulu isitebhisi wokuziphilisa, peony ngeke kufaneleke. Bamphathele nezimbali kumele afakwe egumbini lokuphumula noma ehhovisi, sibonga kuye, uthola ophethe inhlanhla energy oqondile. Uma ungafuni ukuhlala izitshalo, ungakwazi hang isithombe. Ngesikhathi ubusika, ukuze silondoloze impumelelo amandla, ungakwazi ukuhlobisa indlu, hang isithombe nge Umbala ithambe odongeni enyakatho.
Umbala nakho kufeza indima enkulu ukuthi kusho peony of feng shui. Izimbali anemibala ehlukene ukuheha izinto ezahlukene endlini. peonies Ngakho abomvu phezu shui feng kuyinto Activator enamandla notshwala amandla ukuthi aluka esikhaleni ekhaya. Lokhu ngenhlanhla le peonies eziqine. Ngaphansi enamandla - kuba pink ukukhanya nomhlophe.
Phawula ukuthi lo Umbala kancane okukhulu, yebo, akusho wawubaphuca izakhiwo zabo ukuheha abantu ukuphila dating, ukujola.
Lapho kunesidingo khona ukuba peonies ku feng shui?
Uma muntu oyedwa, ochwepheshe kule ndawo belulekwa ukuba ukuhlobisa isithombe esihle nge peonies umnyango ekamelweni lakhe. Umbhangqwana oshadile, okuyinto eye eside usuqashelwa nobuhlobo babo, kodwa sifuna uvuselele izinzwa, kubalulekile ukuba uhlanganyele isithombe egumbini lokuphumula.
Labo babe izindlu zasemaphandleni, kumelwe sikhumbule ukuthi kukhona amandla notshwala hhayi kuphela esikhaleni ekhaya, kodwa futhi ngaphandle kwalo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba siqinise ubuhlobo bomshado ukwenza flowerbed futhi batshala peonies wakhe. Kumele etholakala eduze nendlu (engxenyeni eseningizimu-ntshonalanga ke).
Qaphela ukuthi abasuka, okuyinto e Feng Shui lifanekisela umndeni inhlalakahle nothando, kubalulekile ukususa zonke izithiyo kunokwenzeka ezibangelwa izifundo umgomo. Lokhu kusebenza, ikakhulukazi, ukuba izinto ezihambisana ngamanzi, ezifana okugcinwa, imithombo, imbali isitsha sezimbali nokunye. Ochwepheshe bathi amanzi inomphumela omubi mayelana nokusebenza kahle izimpawu Feng Shui, okuyinto zenzelwe ukuheha ngaphansi nemengamo zendlu ka-mutual, uthando abanothando.
Manje uyazi ukuthi kusho peony of feng shui kuka izimbali enjalo kuzokusiza ekuphileni kwakho siqu kanye yomsebenzi wokuziphilisa!